Manasa anao izahay amin'ny webinar momba ny famatsiam-bola ara-barotra eo noho eo Propars ny alarobia 2 martsa amin'ny 20:00.
* Ahoana ny fampiharana?
* Ahoana no ahazoana tombony?
* Manana fivarotana eny an-tsena toa an'i Amazon sy Trendyol aho Ahoana no ahazoako crédit?
Ny zava-nitranga taloha
Mahazoa hevi-baovao taorian'ny COVID avy amin'ireo mpitarika e-varotra
4 septambra zoma 16:00 - 18:00
20 septambra zoma 16:00 - 18:00
Raiki-pitia amin'ny marketing
Zoma 24 septambra 16:00 - 18:00
Ahoana ny fomba anampian'ny ecommerce ny orinasa hanara-maso ny olan'ny areti-mifindra
28 septambra zoma 16:00 - 18:00